Marketing any anaty sy ny fantsona fivarotana vaovao | Martech Zone
Marketing any anaty ary ny fantsom-barotra vaovao
Alahady, Septambra 27, 2009 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Nandritra ny fotoana niomananako hiteny tany Cincinnati tamin'ity herinandro ity, te-hanome sary mahafinaritra aho izay niresaka ny nanovan'ny fikarohana sy ny haino aman-jery sosialy ny fizotry ny varotra. Ity no antsoiko hoe Fantsona fivarotana vaovao:
Taloha dia ny mpivarotra no nifehy ny marika sy ny hafatra an-tserasera, nitaky ny mpanjifa sy ny orinasa hijerena fihetsiketsehana, hijery ny fampahalalana momba ny bokikely ary hiresaka amin'ny mpivarotra amin'ny farany. Tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy nandray fanapahan-kevitra momba ny fividianana izy ireo. Ilay mpivarotra dia mety ho mandaitra tokoa amin'ny famoahana ny vinavina sy ny fanidiana ny varotra.
Miaraka amin'ny fisian'ny tambajotra sosialy sy ny motera fikarohana, dia tsy marina ny mpanjifa sy ny orinasa mitady… Izy ireo izao remitady. Midika izany fa mitam-piadiana amin'ny orinasao, ny vokatrao, ny serivisinao, ny hafalian'ny mpanjifanao miaraka aminao, ary mety hanana fanapahan-kevitra mihitsy aza ianao. alohan'ny izy ireo aza mifandray amin'ny mpivarotra anao.
Ny fahazoana izany dia manakiana raha te-hamokatra amin'ny fomba mahomby ianao fitarihana marketing any anaty:
Iray amin'ireo hadisoana fahita matetika hitako ny orinasa mandefa tranokala mega izay manana fampahalalana marobe ka mamela ny mpanjifa mety hanala anao. Tsory ny tranonkalanao, tsory ny fandefasanao hafatra ary avelao ny olona hanam-paniriana hahatratra ny telefaona, hijerena demo na hisintona whitepaper.
Raha manome antsitrika lalina kokoa amin'ny tolotrao ianao amin'ny alàlan'ny demô, ny whitepapers, na ny fandinihana tranga… dia mitaky hatrany ny mpitsidika hisoratra anarana alohan'ny handraisany dingana hafa. Ny olona dia zatra manao varotra ny mombamomba azy ireo hahazoana ny vaovao ilainy. Ary ireo izay mandray an'io dingana fanampiny io dia mendrika ny hifandray amin'ny maha-mpitarika mahay azy.
Manakarama mpivarotra manan-tsaina sy manentana be. Ny andron'ny mpivarotra cheesy sy be herim-po dia efa lasa ela. Rehefa mandray ny telefaona ny mpivarotra dia matetika izy ireo no mifanena amina olona any ampita hafa izay efa mahalala ny orinasany. Indraindray dia takatr'izy ireo tsara kokoa noho ilay mpivarotra izany! Mbola miara-miasa amin'ny orinasa aho ary mipetraka amin'ny antson'izy ireo am-pivarotana ho manam-pahaizana momba ny lohahevitra, indraindray dia ny fahasamihafana rehetra.
Manararaotra ny teknolojia amin'ny faran'ny farany ambony indrindra. Raha azonao ny fomba fitetezan'ny mpitsidika mankany amin'ny tranokalanao, dia azonao atao ny mampihatra fandefasana hafatra manokana amin'izy ireo. Raha karoka izany, ny teny fanalahidy samihafa amin'ny fampielezan-kevitra samy hafa dia tokony hiafara amin'ny fiantsoana-hetsika sy ny pejy fipetrahana. Raha Twitter izany dia mety mila fomba firesaka bebe kokoa ianao. Raha LinkedIn izany, fomba fiasa matihanina kokoa. Miaraka amin'ny fandrosoana VOIP sy telefaona, azo atao aza ny maneno telefaona samihafa amin'ny loharano samihafa.
Farafaharatsiny farafaharatsiny, atombohy ny maka sary an-tsaina sy manara-maso ireo làlana samy hafa izay raisin'ireo vinavina ao amin'ny orinasao. Na dokam-barotra amin'ny referral na pay-per-click ianao dia tsy maintsy manana làlana mankamin'ny firotsahana mba hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po.
Tags: fantsom-pivarotana vaovaofanapahan-kevitra mividyfikarohanatandroka fivarotanafantsona media sosialy
Sep 29, 2009 amin'ny 11: 53 AM
"Farafaharatsiny mba hanombohana ny fakana sary an-tsaina sy ny fanarahana ireo làlan-kizorana rehetra raisin'ny vinavina amin'ny raharaham-barotrao"
Inona avy ireo loharanom-pahalalana ampiasainao hanaovana izany? Google Analytics? Radian6? Visistat? Mitady fomba hafa hanarahana ny lalako aho.
Sep 29, 2009 ao amin'ny 8: PM PM
Ny fanombohana amin'ny Analytics dia dingana lehibe hijerena ireo loharano izay manome fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Mbola tsara kokoa aza ny manao fanadihadihana momba ny toerana misy paosy fifamoivoizana mifandraika - izay azo atao amin'ny alàlan'ny fikarohana fikarohana (manaraka fotsiny izay nalahatra ho an'ny teny lakile!).